त्रिविको जग्गामा प्राध्यापक र कर्मचारीको रजाइँ - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
काठमाडौं । शैक्षिक प्रयोजनले अधिग्रहण गरिएको जग्गालाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र कर्मचारीले कमाइको थलो बनाएका छन् । नेपाल प्राध्यापक संघ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघ र कर्मचारी संघले आफूखुसी जग्गा भाडामा लगाइरहेका छन् । कान्तिपुर दैनिकले समाचार छापेको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यायलको जग्गामा त्रिवि कर्मचारी संघले ०८२ सम्म सञ्चालन गर्न दिएको रशकटर पेट्रोल पम्प । मूल सडक सँगैको जग्गामा संघले मासिक ३५ हजार रुपैयाँ (कागजमा) भाडा आउने देखाइएको छ । नेपाल प्राध्यापक संघले मात्रै जग्गाभाडाबाट मासिक २ लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्छ । त्यस्तै कर्मचारी संघले १ लाख र त्रिवि प्राध्यापक संघले १ लाख २५ हजार रुपैयाँ असुल्छन् । तर, यो रकम विश्वविद्यालयको खातामा पुग्दैन ।
जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को दफा ४ अनुसार अधिग्रहण गरिएको जग्गा कर्मचारी, मजदुर बस्ने घर बनाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ । तर, यहाँ संघका सीमित पदाधिकारीले त्यसलाई व्यापारिक स्वार्थमा प्रयोग गरिरहेका छन् ।
बल्खुबाट चोभारतर्फ जाँदा त्रिवि गेटअगाडि रहेको जग्गा र सटर कर्मचारी संघ र प्राध्यापक संघले व्यवसायीलाई भाडामा दिएका हुन् । कर्मचारी संघले विश्वविद्यालयको जग्गामा पेट्रोल पम्प राख्न दिएको छ ।
कागजी रूपमा मासिक जम्मा ३५ हजार लिने गरी २०६७ देखि रसकटर पेट्रोल पम्पलाई जग्गा दिएको हो । ‘मूल बाटोको यति धेरै जग्गा १५ वर्षसम्मका लागि सस्तोमा भाडा किन दिइयो ? हामीले आवाज उठाए पनि कतैबाट छानबिन भएन,’ एक कर्मचारीले भने, ‘आर्थिक पारदर्शिता छैन । विश्वविद्यालयको जग्गालाई प्राध्यापक र कर्मचारी संघले कमाइखाने भाँडो बनाएका छन् ।’
सिड्नीका सुरज भट्टराई जीम हलमा मृत फेला
अस्ट्रेलिया । सिड्नीमा बसोबास गर्दै आएका सुरज भट्टराई मृत फेला परेका छन् । दिउँसो करिब २ बजे उनी आफ्नै […]
समानुपातिकमा नेताका गर्लफ्रेन्ड र श्रीमतीको लर्को
काठमाडाैं । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतफृको सिट बाँडफाँड नगरेपछि पार्टीहरुभित्र समानुपातिक […]
प्रदेश सांसद दीपेन्द्रकुमार कुर्मीको गोली हानी हत्या
कपिलवस्तु । प्रदेश सांसदमा विजयी भएका सांसद दीपेन्द्रकुमार कुर्मीको गोली हानी हत्या भएको छ । कपिलवस्तुमा […]
दुई दिनदेखि बेपत्ता नेता गिरी प्रहरी सम्पर्कमा
काठमाडाैँ, २२ वैशाख - दुई दिनदेखि बेपत्ता भएका नयाँ शक्ति नेपालका नेता मदन गिरी प्रहरीको सम्पर्कमा आउनु भएको […]
ज्यानमारा डेंगुबाट काठमाडौं नै जोखिममा,सतर्कता अपनाउन आग्रह,कसरी बच्ने ?
काठमाडौं । देशका विभिन्न भागमा ज्यानमारा डेंगु रोगको प्रकोप बढ्दै जान थालेको छ । एडिस एजिप्टाई जातको पोथी […]